Kalon’ny fahiny sy ny omaly : Hifamotoana eny Mahamasina ry Gasy Miangola, Feon’Analamanga ary Salomon -
AccueilVaovao SamihafaKalon’ny fahiny sy ny omaly : Hifamotoana eny Mahamasina ry Gasy Miangola, Feon’Analamanga ary Salomon
Mbola tsy lefy laza ary manana ny anjara toerany eo amin’ny kolontsaina malagasy. Hifamotoana eny Mahamasina ry Gasy Miangola, Feon’Analamanga ary Salomon ao anatin’ny fiangaliana indray ireo kalon’ny fahiny sy ny omaly. Etsy amin’ny efitrano malalaky ny Ste Famille Mahamasina no hanatontosana io seho hafa kely io ny alahady 5 Marsa ho avy izao. Ho kaloin’izy ireo an-tsehatra mandritra ny fizaram-potoana voalohany ireo kalon’ny fahiny handrenesana ny sangan’asan’ireo andrarezina tamin’izany raha tsy hitanisa afa-tsy ry Naka Rabemanantsoa, Ramaroson Wilson, Naly Rakotofiringa… Anisan’ireo niangolan-dry Gasy Miangola ny “Ny tia sy ny tiana”, “Izay nafafy”… raha nahafantarana an-dry Feon’Analamanga ny “Ô Ralila”, “Aoka”… Fotoana hiverenan’i Salomon an-tsehatra ihany koa anefa io rehefa ela tsy tazana tamin’ny fampisehoana ka hitondrany an-tsehatra indray ny “Na oviana na oviana”, “Mba tsiditsidio”…
Ankoatra ny anjara entin’ny tsirairay amin’io fampisehoana io dia hampiavaka ny seho ihany koa ny fampiaraham-peo eo amin’ny telo tonta. Fotoana hifanakalozan’ny feon’ireo mpanakanto avy amin’ny vanim-potoana samihafa nefa ampiarahan’ny fitiavana ny kalon’ny fahiny sy ny hiran’ny omaly. Hampiavaka ny fampisehoana ny fitazonana sy ny fiangaliana ireo hira ireo araka ny namoronan’ny tompony azy.